Azonao hatao irery izany. Diniho amin’ny fotoana mangina ny mahakasika ny vadinao. Mbola tianao ve izy ? Inona no tsy tianao eny aminy ? Mety mbola ho tiako ve ny hiaraka aminy afaka 10 taona ?Mety ve ny hataoko azy ? Marina ve ireo fanakianana ataony amiko… Diniho amin’ny fo tsy miangatra.
Miady amin’ny fahazarana
Tsy maintsy mandalo an’izany avokoa ny mpivady rehetra. Mitadiava kosa fomba ialana amin’ny fiainana diso mandeha am-pahazarana loatra. Mba manokàna fotoana ianareo roa hiarahana mijery sinema ohatra na misakafo any amin’ny “restaurant”.
Na dia efa aman-taonany aza no vadinao izy dia tokony hobaboina hatrany. Ilaina ny mikolo ny vatana sy ny tarehy. Fadio noho izany ny manao paozy tsy dia mivaky loha loatra eo imasony. Koloy toy ny ikoloina ny fifankatiavana ny tenanao.
Rehefa ela ny ela dia tsy romantika intsony ny mpivady. Ny kiana no lasa mibahana indrindra raha nahazoazo kibo ohatra ramose. Ovao doka ny fanakiananao azy. Izay ihany no fomba hanatsarana ny fifandraisanareo. Ataovy tsapany fa manandratra azy ianao mba hahatsapany fa mbola tia azy ianao.
Vonoina ny fahitalavitra
Mamono ny filàna ny fahitalavitra. Noho izany, aza asiana fahitalavitra aloha ao amin’ny efitrano fatoriana. Manaraka izany, mifanaraha amin’ny ora laniana manoloana ny fahitalavitra mba hahazoanareo mivady fotoana ho anareo manokana.
Rehefa manaraka izao lahatsoratra izao dia misy no te-hanontany sahady hoe : dia tsy azo atao ve izany ny manakiana azy mihitsy ? » . Rehefa misy ny tsy mety dia tokony holazaina tokoa izany saingy amboary kely kosa ny fomba ilazana ireo zavatra tsy zakanao na hitanao fa tsy mety hataony. Mety ho mora ho azy kokoa ny handray azy raha toa ka atao miendrika hanihany ohatra no fomba ilazana azy.
Koloina ny filàna
Tsy atao mahamenatra ny miresaka momba izany satria manana ny toerany lehibe ao anatin’ny fiainan’ny mpivady ny firaisana ara-nofo. Aza menatra ny mifanaitaitra amin’ny alalan’ny someso na ny hafatra ifandefasanareo mivady amin’ny seham-pifandraisana.
Manao tetikasa lavitr’ezaka
Miaraha mametraka tetikasa hotanterahina. Efa endriky ny fifanarahana hiarahana manatanteraka izany. Mampifandray am-po ny manao izany sady mahatonga anareo hifanara-tsaina. Mety misy foana ny tsy fitovian-kevitra ao anatin’izany fa ny zava-dehibe dia ny fiarahana mijery ny marimaritra iraisana.
Tsy mora ny monina miaraka amin’ny olona tsy mitovy fijery, tsy nitovy fanabeazana. Izany indrindra no ilana ny fahaizana mandefitra sy miaritra.
Ny tena tsara atao dia ny mamadibadika im-pito ny lela mialohan’ ny hitenenenana sy hamoahana teny mandratra. Ezaho hatao foana aloha rehefa misy zavatra tsy azonao nataony ny mizaha ny antony nanaovany izany. Meteza mitoetra amin’ny toerana iray minitra aloha. Mangataha fanazavana fa ataovy amin’ny fomba tsotra sy tsy mivatravatra.